Global Voices teny Malagasy » Didim-pitsaràna tao Trinidad & Tobago manome alàlana ny fandroahana zaza Venezoeliàna tsy ampy taona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Desambra 2020 6:19 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika avylavitra
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Venezoela, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Andiana Venezoeliàna mpitady fialokalofana tonga fanindroany tao amin'ny tanin'i Trinidad, ny 24 Novambra 2020. Voalahatra hiatrika “habeas corpus ” (fihainoan'ny fitsaràna) tao Trinidad & Tobago ilay vondrona. Pikantsary nalaina avy ao amin'ny lahatsarin'ny Trinidad and Tobago Newsday  teo am-pigadonana, izay navoaka tao amin'ny fantsona YouTube -n'ilay gazety.
Mitohy ao Trinidad & Tobago ny adihevitry ny daholobe momba ny mpitsoaponenana sy ny mpitady fialokalofana, taorian'ny  fanapahankevitry ny fanjakàna handroaka zaza Venezoeliàna 16 tsy ampy taona sy olondehibe 11, ny 22 Novambra lasa teo, fotoana fohy talohan'ny tokony nitondràna azy ireo hiatrika habeas corpus . Noho ny didim-pitsaràna, naverina tao Trinidad & Tobago ilay vondrona tamin'ny 24 Novambra.
Amin'izao fotoana izao, ilay mpitsara ao amin'ny Fitsarana Antampony, Judge Frank Seepersad, dia mandà tsy hamoaka didy manakana ny fanjakàna tsy handroaka ankizivavy iray 11 taona isan'ireo noroahana hody an-tanindrazana. Ao anatin'ny didy navoakany, nanazava izy :
[…] tsy afapo ny fitsaràna fa rehefa jerena ny toejavatra rehetra voafaritra, hoe ny fanamaivanana takiana ao anatin'ilay fangatahana manana ny lanjany dia mety hitafy fahombiazana ka tokony handray fijery manokana ny fitsaràna amin'ny fanerena ny fanjakàna tsy hampihatra izay hita fa lalàna anatiny azo ampiharina.
Ny rafitra ara-pisainana manamarina ny fanapahankevitra noraisin'i Seepersad dia mifototra amin'ny zavamisy hoe  ny fangatahana araka ny lalàna nataon'ilay zaza dia niainga avy amin'ny drafitra 2014 momba ny politika mahakasika ireo mpitady fialokalofana sy mpitsoaponenana , antontan-kevitra iray nankatoavin'ny kabinetra, saingy tsy mbola nolanian'ny Antenimiera . Io, hoy izy, dia midika fa manana ny fahefana feno ny governemanta hampifanaraka ny politika nasiônaly araka izay ilàny azy.
Ny minisitry ny filaminana anatiny, Stuart Young, nanambara ho an'ny daholobe tamin'ny filazàna fa ilay fanapahankevitra voalohany handroaka ilay vondrona dia niainga avy amin'ny ahiahy momba  ny valanaretina COVID-19, sy fanantitranterana fa efa hatramin'ny Martsa ny sisintany  no nakatona. Fijoroana iray “tsy mnohintohina ny Fitsarana […] ho toy ny fiovàna ara-politika tsy manaraka fenitra na tsy am-piheverana io”, raha ny fanapahankevitr'i Seepersad no raisina.”
VAKIO MISIMISY KOKOA (amin'ny fiteny anglisy): Trinidad & Tobago deports Venezuelan women and children as matter of ‘national security’ 
Evan, toa an'i Seepersad ihany, dia nanome tsiny ny fanjakàna noho ilay fomba mampididoza  nentina nandroaka nody an-tanindrazana ilay vondrona, notsiniany  ihany koa ny renin'ilay zaza (izay tsy manana taratasy ara-dalàna ao Trinidad & Tobago) araka ilay lazainy hoe “tsy firaharahiana feno fahasahiana sy avona ao amin'ireo lalàna momba ny fifindramonina eto amin'ity Repoblika ity” ary ny tsy fahavitàny mijery tsara araka ny tokony ho izy izay mahasoa ilay zaza araka ny voalazan'ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana izay nataon'ireo mpisolovava azy ho kitro nifaharan'ny raharahany:
Misy marobe ireo olompirenena ato amin'ity Repoblika ity no miatrika fahasahiranana ara-toekarena ary maniry fatratra ny handeha hifindra any amina firenena iray izay mamiratra kokoa ny vina ara-toekarena, saingy mety tsy hanana ny sata maha-pitsoaponenana na mpangataka fialokalofana ireny olompirenena ireny araka ny Fifanarahana tamin'ny 1951.
Ny mpitsoaponenana iray dia faritan'ny Fifanarahana tamin'ny 1951 momba ny Mpitsoaponenana ho  “olona iray tsy afaka, na tsy maniry ny hiverina any amin'ny firenena niaviany noho ny tahotra voamarina fa mety hiharan'ny fanenjehana noho ny resaka foko, finoana, zompirenena zakainy, ny maha-mpikambana azy anaty vondrona sôsialy iray manokana, na ny fijery pôlitikany.”
Ny didy navoakan'ny mpitsara, Seepersad, dia samihafa amin'ny an'ireo mpitsara roa hafa  — Avason Quinlan-Williams sy Joan Charles — izay nihaino ny fanamarihana avy amin'ilay andiany, tsy fitoviam-pijery milaza zavatra maro momba izay heverin'ny olona mahakasika io olana io.
Ny marina, ny matoandahatsoratra tamin'ny 2 Desambra teo amin'ireo gazety roa ao an-toerana dia samy naka ny lafy izay tiany tamin'ilay adihevitra. Ny Trinidad and Tobago Newsday nanosoka hevitra  hoe toa “nandingana” ny fitsaràna ny governemanta:
[…] ny isa midangan'ny olona naverina any amin'ny tany niaviany sy ny fotoana nofidiana hanaovana ilay fanambaràna dia toy ny manosoka ny hoe ireo hetsika nataon'ny fanjakana dia sahala amin'ny fihantsiana ny Fitsarana Antampony, ny lalàna iraisampirenena ary ny fangorahana amin'ny maha-olombelona.
Ny Trinidad and Tobago Guardian, etsy ankilany, nanamarika  hoe nazava tsara ny Mpitsara Seepersad momba ny fananan'ny fanjakana “zo handroaka hody ireo mpifindramonina tsy ara-dalàna”:
Amin'ny maha-olompirenena, ilaintsika ny mijery raha tena tiantsika tokoa ny hisokatra amin'ny fitobahan'ireo mpifindramonina ao anatin'ny vanimpotoana iray izay efa mampanahirana ny firenena amin'ny fiatrehana ny filàn'ireo olompireneny manokana.
Ao amin'io pejiny io ihany anefa, izay nisy ny fanehoankevitry ny Guardian, no nivoaka ny fandalinana iray  nataon'ilay mpanao gazety Wesley Gibbings, izay nilaza hoe “tsy nisy hafa noraisina” — ankoatra ny maha-olombelona, tsy misy fijery hafa an'ilay olana.
Ny mpampanoa lalàna ao Trinidad & Tobago, Faris Al Rawi, nilaza  momba ilay fanapahankevitra farany noraisin'ny fitsaràna:
Raha raisina ho fandresena mazava araka ny lalàna ilay izy, tsy hionona [amin'io] aho [it], indrindra fa misy idiran'ny resaka maha-olombelona […] saingy olona manana adidy aho[…] mba hampanaja ny lalàna eto Trinidad & Tobago.
Nampiany  fa afaka nataon'ireo Venezoeliàna ny nangataka vizà  hidirana ara-dalàna ao amin'ny firenena, ary “tsy holavina tsotra izao fotsiny ” ny vizà tahàka izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/12/06/150615/
 habeas corpus: https://www.cnrtl.fr/definition/habeas%20corpus
 nanazava izy : https://guardian.co.tt/news/judge-rules-state-free-to-deport-girl-11-6.2.1257955.98462fa098
 drafitra 2014 momba ny politika mahakasika ireo mpitady fialokalofana sy mpitsoaponenana: https://www.unhcr.org/57fcf3567.pdf
 tsy mbola nolanian'ny Antenimiera: https://globalvoices.org/2019/02/12/venezuelas-humanitarian-crisis-puts-trinidad-and-tobagos-refugee-policy-under-the-microscope/
 efa hatramin'ny Martsa ny sisintany: https://globalvoices.org/2020/03/16/trinidad-tobago-closes-its-borders-as-covid-19-cases-double-to-four/
 Fifanarahana tamin'ny 1951 momba ny Mpitsoaponenana ho : https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
 nanosoka hevitra: https://newsday.co.tt/2020/12/01/once-more-with-feeling/
 ny fandalinana iray: https://twitter.com/wgibbings/status/1334093019126132736?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1334093019126132736%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fglobalvoices.org%2F%3Fp%3D724285preview%3Dtrue
 nangataka vizà: https://globalvoices.org/2019/06/15/visas-now-required-for-venezuelans-as-trinidad-and-tobago-concludes-migrant-registration-process/